Muqdisho:-Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda JFS C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa ka jawaabay warbixin ay soo saareen Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo eedeyn loogu jeediyay Wasaaradda Maaliyadda ka dib markii ay ku tagri faleen dakhliga u soo xarooday miisaaniyada DFS.
Warbixinta uu soo saaray guddigu maaliyada golaha baarlamaanka DFS wuxuu si faahfaahsan kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniyad sanadeedka sanadka 2018-ka, taas ka muuqata in wasaarada maaliyada ay is daba mari weyn ka muuqato .
Wasiirka Maaliyada JFS C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in haatan isbadal wayn uu ka jiro Maamulka Maaliyadda wasaarada DFS taasna ay beesha caalamka soo dhaweysay qaabka DFS u maareysay Miisaaniyada u soo xarootay.
Wasiirka Maaliyada JFS C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan eedeynta kaga timid Guddiga Maaliyadda ee Golaha baarlamaanka DFS .
Waribixna oo aad u dheer, qayba badana taabaneysa, ayaa waxaa ino soo koobaya Xuseen Barre Aaden.VOA